အထွေထွေစွဲ - အထီးတွင်သင့် ဦး နှောက် - ဦး နှောက်ယန္တရားများ
ဤတွင်စွဲလမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယေဘူယျအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ အင်တာနက် porn စွဲလမ်းမှုကိုနားလည်ခြင်းဆိုသည်မှာစွဲလမ်းမှုယန္တရားများကိုနားလည်ခြင်းဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းမှုအားလုံးသည် neurocircuitry တစ်ခုတည်းကိုခိုးယူခြင်းနှင့် neurochemicals များအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ အခြေခံဇီဝကမ္မနိယာမမှာမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်အသစ်သောသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအရာများကိုမဖန်တီးနိုင်ခြင်း၊ သူတို့သည်ပုံမှန် ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်လျော့ချခြင်းများပြုလုပ်သည်။ အနှစ်သာရအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း (နို့တိုက်သတ္တဝါများနှောင်ကြိုး / ချစ်ခြင်းတိုက်ခြင်း) နှင့်အရက်သောက်ခြင်းအတွက်ယန္တရားကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်သည် (yummy အစားအစာ၊ မိတ်လိုက်ရာသီ) ။
ထိပ်တန်းသုတေသီတွေအားလုံးစှဲတူညီသောလမ်းကြောင်းများနှင့်ယန္တရားများပါဝင်ကြောင်းသဘောတူသည်။ ဤတွင်ကျော်ကြားတဲ့စွဲသုတေသီ Erik Nestler ကနေအနည်းငယ်အမေးအဖြေများဖြစ်ကြသည် (Nestler Labs က) ။
မေး။ ။ ဦး နှောက်ထဲကအပြောင်းအလဲတွေကိုခင်ဗျားဘယ်လိုပြောင်းနိုင်လဲ။
ဖြေ။ ။ ဦး နှောက်ထဲမှာမူးယစ်ဆေးစွဲမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အပြောင်းအလဲတွေကအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။ ဤပြောင်းလဲမှုများသည်ပြောင်းပြန်ပြောင်းနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတတ်သည်။ ပြောင်းပြန်ဖြစ်ခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်စွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဆိုးသောအလေ့အထများ (အတင်းအကျပ်) ကို“ နားမလည်” ရန်လိုအပ်သည်။
A: အလားတူ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုသည်သဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအခြားရောဂါဗေဒဆိုင်ရာအခြေအနေများတွင်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ယင်းတို့တွင်ရောဂါပိုးမွှားစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ လိင်စွဲလမ်းခြင်းစသည့်အခြေအနေများပါဝင်သည်။
မေး: related စှဲ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများဖြစ်ပါသလား ဘယ်လိုလဲ? (မူးယစ်ဆေးဝါး, လောင်းကစား, etc)
တစ်ဦးက: တူညီသောဦးနှောက်ဒေသများ (ဦးနှောက်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း) ၏အချို့သောအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဒါခေါ်သည့်သဘာဝစှဲဖြန်ဖြေအတွက်ပြင်းထန်စွာပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းလက်တွေ့လေ့လာမှုများအနေဖြင့်တိုးမြှင့်သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောဤအပိုင်းတွင်အများပြည်သူအတွက်ဆောင်းပါးများနှင့်သုတေသနဆောင်းပါးများပါ ၀ င်သည်။ သငျသညျစွဲကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်လျှင်, ငါစွဲယန္တရားများကိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ရန် lay ဆောင်းပါးများနှင့်အတူစတင်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ “ L” အက္ခရာသည်၎င်းတို့မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
(L) ရိုးရှင်းသောပျော်မွေ့: like နှိပ် vs. လိုသော, Kent Berridge (2004) ဖြင့်
စွဲလမ်းနှင့်ဦးနှောက်ဆုကြေးနှင့် Antireward Pathways ။ (2011)
စွဲ: dopamine ဆုလာဘ် circuitry ကျော်လွန်. (2011)
စွဲ - ဦး နှောက်၏ထိန်းချုပ်မှုတိုက်နယ်ကိုလွှမ်းမိုးရန်မျှော်လင့်ချက်လျော့နည်းစေခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်ခံစားချက်တိုးလာခြင်း
စွဲလမ်း-လိုပဲအမူအကျင့် (2017) အရင်းခံကျတာကတော့ Striatal ဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင် ALTER
Commentary: စွဲ Neuroclinical အကဲဖြတ်: စွဲခြင်းရောဂါများအတွက်တစ်ဦးကအာရုံကြောသိပ္ပံ-အခြေခံပြီးမူဘောင် (2017)
Cortico-Basal Ganglia ဆုကြေးကွန်ယက်: Microcircuitry (2010)
မျိုးစိတ်ချင်းထိရောက်သည့်အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်ပတ်သက်သောလူသားများနှင့်ဆက်စပ်သောတိရိစ္ဆာန်များ၏အဓိကထိရောက်သောအတွေ့အကြုံများကိုဒီကုဒ် (decoding) (PANSKEPP)
အကျင့်, compulsive နှင့်စွဲဘို့ Dorsal Striatal Circuits (2019)
စွဲလမ်းမှု, ဆုကြေး, Antireward နှင့်စိတ်ခံစားမှုမှတ်ဉာဏ် (2009) တွင်အာရုံခံ circuits များ၏ Dynamics ကို
စွဲလမ်းနေတဲ့ဦးနှောက်ရောဂါဖြစ်သနည်း မာ့ခ် Lewis ကမှ (2017) Kent Berridge တုံ့ပြန်မှု
like နှိပ်ခြင်းနှင့် Deficiency Syndrome (RDS) ၌ဆပ်ချိတ်ဆက်လိုသော: ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ် circuitry (2012) တွင် differential ကို Response hypothesizing
အာရုံကြောနှင့် compulsive မူးယစ်ဆေးရှာကြံအလေ့အထများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအမှတ်တရများအခြေခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားများ - စွဲလမ်း၏ဝတ္ထုကုသမှုအတွက်လက္ခဏာများ (2014)
စွဲလမ်း၏အာရုံကြောယန္တရားများ: အကျိုးကို-related သင်ယူမှု၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်မှတ်ဉာဏ် (2006)
စွဲလမ်းမှု၏ဦးနှောက်ရောဂါမော်ဒယ် (2016) မှ Neurobiologic တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ
မူးယစ်ဆေးဆုကြေးနှင့်စွဲလမ်းမှုအတွက် Neurobiologic လုပ်ငန်းစဉ် (2004)
ကုသမှုများအတွက်စွဲမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ Neurobiology (2003)
စွဲလမ်းမှု၏ Neurocircuitry (2010)
မျောက်ဝံများအတွက်တာ Neuroimaging နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး။ (2011)
မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေများအတွက် Neuroimaging (2012)
နျူကလိယ Accumbens နှင့်ဆုကြေးနှင့်စိတ်ခံစားမှု Circuitry အတွက်၎င်း၏အခန်းက္ပမြား: A နိုင်သည့်အလားအလာ, Hot ရှုပ်ထွေးပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်စိတ်ခံစားမှု Disorders အတွက် (2017)
ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူအပေါ် neurotransmitters ၏ Orquestic စည်းမျဉ်း (2014)
Perineuronal ပိုက်ကွန်နဲ့စွဲလမ်း (2015)
ငယ်ရွယ်လူကြီးများနှင့် Impulse / compulsive (2019) တွင်အသက်၏အရည်အသွေးကိုအကြားဆက်ဆံရေးမျိုး
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်း (2019) ၏ Psychobiological မော်ဒယ်မှတဆင့်အဆိုပါစွဲဦးနှောက် Rewiring
actin Depolymerization (2013) ကသမ်ဖက်တမင်း-ဆက်စပ်နေတဲ့မှတ်ဥာဏ်၏ရွေးချယ်မှု, retrieval-လွတ်လပ်သော Disruption
Shared ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော underlying စွဲခြင်းရောဂါနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအရေးတကြီးသဘောထားနဲ့ (2019) ဆက်နွယ်နေပါသည်
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ (2017) တွင် relapse နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ် abstinence ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ neuroimaging အသုံးပြုခြင်း: အစွဲလူ့ဦးနှောက်၏ biomarkers ဆီသို့
စွဲလမ်းမှုအတွက်သည်ညီမျှမှုအာရုံခံ Circuits (2013)
(L) ကိုစှဲသုတေသန: CREB (2007)
ကျနော်တို့စွဲ (2007) Get ဘယ်လို (L)
(L) အဆိုပါစွဲဦးနှောက်: Nestler နှင့် Malenka (2004)
(L) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအပေါ်သင့်ဦးနှောက်: စွဲမှု၏ Fishhooks (2008)
(L) ဦး နှောက်တွင် synapse ဖွဲ့စည်းခြင်း၏သီအိုရီအသစ် - homeostasis (2013)
(L) တဏှာ၏သိပ္ပံ: Kent Berridge (2015)
အဆိုပါ Spurned နှင့် Tipsy သီး Fly မှစ. (L) ကိုသင်ယူ (2012)
(L) နီကိုတင်းနှင့်ကိုကင်းပထမဦးဆုံးထိတွေ့ပြီးနောက်ဦးနှောက်အပေါ် (2011) အလားတူအမှတ်အသားစွန့်ခွာ
(L) လေဖြတ်ကိုကင်းစွဲ၏ကွိဘက်လူကိုကုသပေး, သုတေသီများ (2012) သတင်းပို့